Nagu saabsan - Tanyun Junrong (Liaoning) Machadka Cilmi-baarista Kiimikada Qalabka Cusub Incubator Co., Ltd.
La aasaasay 1971, Tanyun Junrong (Liaoning) Machadka Cilmi-baarista Kiimikada Qalabka Cusub Incubator Co., Ltd. (Magaca shirkadda asalka ah: Yingkou Tanyun Kiimikada Cilmi-baarista Machadka Co., Ltd. Kumbuyuutarrada Tanyun) waa shirkadda waalidka ee Tanyun Technology Group. Waqtigan xaadirka ah oo ku saabsan aagga qiyaastii 12000 mitir murabac ah, Tanyun Kiimikooyinka waa shirkaddii ugu horreysay ee madal tiknoolajiyadeed ee 'Kiimikada Qalabka Cusub ee Wax Soo Saarka iyo Cilmi-baarista Cilmi-baarista' iyo shirkaddii ugu horreysay ee cilmi-baarista iyo soo-saarista ee kiimikada kiimikada dhexdhexaadka ah iyo shirkadda wax soo saarka.
Tan iyo Markii la Aasaasay, Kiimikooyinka Kiimikada waxay u heellan yihiin horumarinta, soo saarista iyo iibinta dhexdhexaadiyeyaasha kiimikada wanaagsan. Shirkadda ayaa si dhow ula socotay
xeeladaha is-dhexgalka madaniga iyo militariga waxayna sameeyeen hal-abuur joogto ah. Muddo sanado ah, waxay qabatay in kabadan 80 mashaariic cilmi baaris oo gudaha iyo dibada ah waxaana lagudoonsiiyey in kabadan 50 degmo,
abaalmarinno heer gobol iyo heer qaran ah oo loogu talagalay horumarka sayniska iyo teknolojiyadda. Badeecadaha ayaa si ballaaran loogu dabaqay aagagga ay ka mid yihiin duulista, aerospace, warshadaha milatariga, warshadaha madaniga ah waxaana laga iibiyey in ka badan 20 waddan iyo aagag, iyadoo laga helayo aqoonsi ballaadhan gudaha iyo dibaddaba.
Waxaa si xoog leh u taageeraya ilaha badan ee shirkadda kooxda, Tanyun Kiimikooyinka waxay ka aasaaseen Xarunta Tijaabinta Warshadaha (oo leh heer horumarsan oo gudaha ah) Yingkou waxayna sameysay Xarumo farsamo oo heer caalami ah R&D iyo shaybaarada R&D ee Shanghai, Hangzhou iyo Suzhou siday u kala horreeyaan. Awoodda xoogan ee cilmi baarista iyo horumarinta, Tanyun waxay soo bandhigi kartaa alaab tayo sare leh oo loogu talagalay baahida macaamiisha gudaha iyo shisheeyaha.
Tanyun waxay ku hogaamisay shirkadaha kale iyo machadyada cilmi baarista inay aasaasaan Isbahaysiga Istaraatiijiyadeed Istaraatiijiyadda Istaraatiijiyadda Istaraatiijiyadda Tiknoolajiyadda Qaranka ee Fiican Kiimikooyinka, iyadoo diiradda la saarayo iskaashiga qoto-dheer ee lala yeelanayo machadyada iyo kulliyadaha cilmi-baarista ee gudaha iyo dibedda. Iyada oo taageero farsamo sare ka badan 100 aqoonyahano, dhakhaatiir,
macallimiin iyo khubaro, Tanyun waxay noqotay shirkad dhammaystiran oo leh nidaam bey'adeed oo ka kooban cilmi baaris, horumar, wax soo saar, isbeddel farsamo iyo adeeg. Shirkaddu waxay noqotay mid ka mid ah shirkadaha ugu wanaagsan ee bixiya badeecooyin gaar ah oo dhexdhexaad ah oo dabooli kara baahiyaha gaarka ah ee macaamiisha.
Taageerada shirkadda kooxda iyo faa'iidooyinka tikniyoolajiyadda, Tanyun waxay heshay abaalmarinno iyo abaalmarinno fara badan, oo ay ku jiraan National Hi-Tech Enterprise, Qualification of Liaoning Enterprise Technology Center, Liaoning Model Integrity Enterprise, National Model Credit Enterprise. Shirkaddu sidoo kale waxay leedahay Shahaadada Kormeerka Shirkadda Kiimikada Heerka Qaranka. Astaan-ganacsiyeedka Tanyun waxaa u aqoonsaday Saanadda Caanka ah ee Shiinaha Shirkadda Ganacsiga ee Maamulka Gobolka ee Warshadaha iyo Ganacsiga.
Go'aansaday inaan horay usii faafo. Ku dadaal dadaal heer sare ah. Kasbashada guulo waaweyn iyo guulo, Kiimikooyin Tanyan ah ayaa had iyo jeer leh maskax aan lahayn isla weyni iyo fowdo; caqabado soo foodsaaray, Kiimikooyinka Tanyun ayaa si isdaba joog ah u socda. Aniga oo ka faa'iideysaneyna dhaqaalaha wadanka guud ahaan kor u qaadista iyo isbadalka, Tanyun Kiimikooyinku waxay la socdeen xawaaraha. Iyada oo ku saleysan xoogga xoogan ee cilmi baarista iyo horumarka iyo ruuxa farsamada dheer ee muddada dheer soconaya, Tanyun wuxuu qaadi doonaa tallaabooyin wuxuuna tagi doonaa masraxa adduunka, isagoo si dhow ula socda istiraatiijiyadda qaran ee Belt iyo Wadada. Adeegga xoogan ee macaamiisha u janjeedha, Tanyun wuxuu isku dayi doonaa inuu noqdo summad qaran oo heer sare ah oo leh himilada ah inuu BASF ka noqdo Shiinaha!